जान्नुहोस् ! यस्ता छन् स्वास्थ्यको लागि मूला खानुका फाइदाहरु
जनवरी 4, 2019 जनवरी 4, 2019 साइन्स इन्फोटेक	2 Comments डा. राम बहादुर बोहरा, मूला, स्वास्थ्य
मूला हरेकको करेसा बारीमा लगाउन सकिने र उत्पादन हुने तरकारी हो स्वास्थ्य क्षेत्रमा यसको ठूलो महत्व छ । हामीले मुला स्वादको रूपमा खान्छौं तर यस्लाई औषधिको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौं । मूलाको उपयोग गरेर हामीले पाचन क्रियालाई सुधार्न सक्छौं मुलाको पातको रस बनाएर त्यसमा खस्रो चिनि राखेर जण्डिसको उपचार घरमै गर्न सक्छौं । मूलाको प्रयोग सवैभन्दा बढी मधुमेहका रोगीले गर्दा राम्रो फाइदा देखिन्छ । गर्मीको प्रभावदेखि खट्टी डकारहरू आउँछ भने त एक कप मूलाको रसमा मिश्री मिसाएर पिउने गरेमा लाभ हुन्छ।
यस्ता अनगिन्ती रोगहरूछन् जसमा मूलाले राम्रो फाइदा गर्दछ । हामीले यदि हाम्रो करेसा बारीबाटै जण्डिस, पाइल्स, मृगौला जस्ता रोग निको बनाउन सक्छौं । आज हामीले यस्ता लाभदायक तरकारी काचै खान सकिने बस्तुलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौं । आज हाम्रो करेसा बारी या गमलामा रोपेर पनि उत्पादन हुने मूलालाई वेवास्ता गर्छौ, मुलाको सागलाई । मुला प्रयोग गरेपनि त्यसको साग मिल्काइदिन्छौ । यद्यपी मुलाको सागको आफ्नो विशेषता छन् । मूलाको अन्य प्रयोग यहाँ दिइएको छ हेरेर लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ ।
१. मुलाको पातमा भिटामिन ए, बि, सिका साथै क्लोरिन, फस्फोरस, सोडियम, आइरन, म्याग्नेसियम र अन्य पोषक तत्व पाइन्छ । यो पेटको लागि अत्यान्तै लाभदायक हुन्छ । साथै मुत्र विकारमा पनि यसको सेवन राम्रो मानिन्छ ।
२. मुलाको पातलाई सब्जी र परठा बनाउनमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसको सेवनले शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमता बृद्धि हुन्छ । थकान महसुष हुदैन ।
३. पायल्सका रोगीका निम्ति मुलाको पात निकै लाभदायक हुन्छ । हरेक दिन यसको सेवन गर्नाले पायल्सको समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ ।
४. यसमा सोडियम हुन्छ । यसले शरीरमा नुनको अभाव पूर्ति गर्छ । त्यसैले उच्च रक्तचापका रोगीका लागि पनि यो फाइदाजनक हुन्छ ।
५. यो फाइबरको पनि राम्रो स्रोत हो । यसले कब्जियतको समस्याबाट छुटकारा दिलाउँछ ।
← जान्नुहोस् ! रुद्राक्षको माला लगाउनुको बैज्ञानिक कारणहरु
जिल्लामा नै पहिलो पटक काँटी उद्योग स्थापना →
फ्रेवुअरी 5, 2019 अप्रील 12, 2019 साइन्स इन्फोटेक 12
2 thoughts on “स्वास्थ्यको लागि मूला खानुका फाइदाहरु”
Pingback:मुलाको पातको उपयोगबाट हुने फाइदाहरु